Xafladaha reer somaliland iyo calanka shahaadadu ku qoran tahay
Sida ay dad badani ogsoon yihiin calanka maamulka isku magacaabay Somaliland waxaa ku qoran ashahaadada islaamka.” La ilaaha ilalaahu muxamedu rasuululaahi” Ilaahay xaq lagu caabudaa ma jiro aan ka ahayn eebaha weyn ee abuuray adaanaha iyo waxwalba ee dunida ku dhaqan, Maxamedna waa rasuulkii ilaahay soo diray. Kelmadahaasi waa kelmadaha aasaaska iyo saldhiga u ah diinta islaamka. Waa caqiidada rasmiga ah ee xambaarsan waxa aynu rumeysanahay haddii aynu nahay dadka muslimiinta ah. Qofku kolka uu islaamka soo gelaayona waxaa uu ugu horeyn qiraa oo ku dhawaaqaa kelmadaha aan kor kusoo sheegnay. Haddii aanu qofku qirina ma ansaxeyso islaanimadiisu maxaa yeelay iimaanka qofkaasi ma dhama. Ku dheeraan maayo maxaa yeelay qof kasta oo muslinka ku abtirsadaa waa ogsoon yahay qiimaha ay leeyihiin dhowrkaas kelmadood ee calanka somaliland uu xambaarsan yahay.
Haddaba waxaa la yaab leh in dad badan oo reer somaliland ahi aaneyba fahmin macnaha kelmadaha ku qoran calanka ay sameysteen. Waxaa kaloo aaney fahmin dhowrista ay mudan yihiin kelmadahaasi. Calanka soomaliland waxaa uu suran yahay meel walba oo dad reer somaliland ahi ay xaflad ku qabsanayaan, sida golayaasha heesaha ee fanaaniinta lagu casumo, aroosyada iyo meelaha kale ee kulamadu ka dhacaan. Waxaan marar badan arkay meelo xaflado ah oo fanaaniin caan ahi ka heesayaan, oo kolkii ay heesuhu isku dhacaan ay dadku qoobka ciyaar bilaabaan. Balse waxaa ah wax aad looga xumaado kolka aad aragtid kelmada” laa ilaaha ilalaahu muxamed rasuululaahi” oo ka muuqata meel ka dameysa dadkaa qoob ka ciyaaraya.
Maxaa yeelay calanka ay kelmadahaasi ku qoran yihiin ayaa ku dhegan meesha qoobka ciyaarku ka dhacaayo. Waxaa taas kasii daran kolkii aad aragto calankii shahaadadu ku qoreyd oo lagu duubay qofkii heesaayey. Shame on you! Shame on you!
Aaway sharaftii iyo qadarintii towxiidka? Waxaad leedihiin maxaa naloo aqoonsan waayey, sow ma dhici karto iney idin haysato cuqubada kelmadahaa towxiidka ee lagu duubay gabdhaha heesaaya, calanka ku dhegan meel walba oo xafladi ka dhaceyso.
Haddaba culima udiinka reer soomaliland waxaa la gudboon iney ka hadlaan arinkan. Dadkana ay fahamsiiyaan inuu calankani xambaarsan yahay kelimada towxiidka loona baahan yahay in la dhowro ee aan lagu wadhin meel walba. Haddii aan wax laga qaban arinkan iyo ku ciyaarida kelmadaha towxiidka ah ee calanka ku qoran waxaa laga yaabaa in carada ilaahay kusoo deg degto reer soamliland. Cadhadu kolka ay timaadona dadka waa kuwada dhacdaa sheekh iyo shariif iyo mid heesa. Sidaas darteed waxaa la gudboon dadka reer somaliland iney dhowraan sharafta kelmadaha towxiidka ah ee ay calanka ku qoreen ama waa iney ka tirtiraan. Akhristow bal masraxyada ay ka heesaan fanaaniinta reer somaliland, dhamaantood waxaa lagu qurxiyaa calanka ay ku qoran tahay kelmada towxiidka. Suàashu waxaa weeyaan, heeso iyo qoob ka ciyaar,rag iyo dumar isku dhexmilmay iyo kelmada towxiidka ee qadarinta mudani meel ma wada galaan?
C/risaq M xuseen, sweden
Mustafa Maxamed- Orodyahan soomaaliyeed oo kudayasho muddan. Akhri...